Challenge The Good News Paper - Muparidzi wenhema anopupura chokwadi (Shona)
Pericles aitungamira kukereke huru kwazvo yaiva nevatendi vaiva nepfuma zhinji,asi vatendi ava vaisaziva kuti wavo aireva nhema pamberi pekereke.
Pericles anoti " makore apfuura ndakuita bhizimusi rehuku ,ndakatora chikwereti kubhangi , asi kukereke ndakanyepa kuti Mwari vakanga vandipa mari yokuita bhizimusi nokuda kwe minamato yangu yava nesimba. Ndakaita kuti vatendi vose vatende kuti ndava nechipo chokunamatira kuti vaite mari muupenyu hwavo. Vanhu vaiti kana vachitsvaga mabasa uye kuva nemari ,vaiuya kwandiri. Chandisinganzwisise nanhasi ndechekuti minamato iyi yayipindurwa.'
Pericles anopupura kuti ainyeba zvikuru pamusoro pokubata kwa Mwari muupenyu hwevanhu achiitira kuti vazvipire kuna Jesu.
Pericles anoti "Zvinhu zvaitofamba nokuti ndauudza vanhu zvavanonda kunzwa, ndaunganidza vanhu vazhinji uye ndichiramba ndichivaudza nhema kuti vatsigire basa randaiita". Nerimwe zuva shamwari yaMufundisi Pericles yakavabvunza kuti vakanga vagamuchira Jesu muMweya nemuzvokwadi pamwe nokusimbiswa munhu wemukati here kana kuti vana mukristu wechipameso. Shamwari iyi yakatsanangudza ruponeso zvakajeka uye nokuti hasha dzaMwari dzakanangana neVanhu nokuda kwezvivi, nokuti isu tinokodzera ruenzamso wa Mwari runova rufu nokuda kwezvivi zvedu, uyewo nokuti Mwari nokuda kwerudo rwavo vakatipa nzira yokupona nayo kuburikidza nerufu rwa Jesu Kristu, iye ava Mwari uye munhuzve ndiye akatifira pamuchinyikwa. Akataurawo pamusoro pokuzvarwa kutsva naMwari kubva munaJohani 1:12-13 iyo inoti "Asi vose vakamugamuchira Iye wakavapa simba kuti vave vana vaMwari kuna ivo vanotenda kuzita rake. Asi vakaberekwa kwete nokuda kweropa kana nokuda kwenyama, kana nokuda komurume, asi naMwari. Kubva panhaurirano iyi Pericles akatendeuka kubva kuchivi chake kunaMwari uye kumaitiro ake okushandisa zita raMwari. Akakumbira Mwari kuti vashandure munhu wemukati uye nokumupa moyo mutsva, sezvinorehwa neshoko, pamwe nokumutsiredza mweya wake.
Pericles anoti "kunyangwe zvazvo ndaenda kukereke ndisati ndapinduka ndinopupura kuti pakava neshanduko huru kwazvo muupenyu hwangu. Minamato yangu yakava yokunyengeterera mikana yokuparidza Jesu, kwete kutsvaga pfuma. Ikozvino ndinonzwa kusununguka kukuru kwazvo. Ndakapupura manyepo angu ose kukureke uye handifizve ndakaparidza nezvokuvimba nepfuma".
Pericles anotora shoko panaMateu 7:22-23 apo Jesu anoudza vanhu vakaita minana muzita rake kuti haana kumbovaziva pamwe neminana. Vakorinte 3:5 apo mupositori Pauro anoudza chero VaKristu kuti vazvinzvere kuti vaone kana vari mungwara rokutenda. Pericles anoti "ndima mbiri idzi ndidzo dzakaita kuti ndizvinzvere kufamba kwangu mukutenda. Ndinokurudzira vose vakakurira mukereke kuti vazvininipise vazvinzvere kuti vaone kuti vakanyatso tendeuka here kubva kuzvivi.
Pericles anoti 'usazvinyengere" ichokwadi kuriko kutenda kunokuitisa mabasa asi kutenda ikoko hakuna ruponeso. Usafuurirwa nezvido zvenyama yako pamwe nezvaunoona panyika pano. Usakudza zvido zvenyama yako ,kudza mweya nemoyo wako nekuverenga bhaibheri ,kusangana nevamwe vatendi kunamata pamwe nekushumirirana Jesu."•
<< Umfundisi wamanga uyalivuma iqiniso (Zulu)
Finding a life of value >>